Maraykanka oo joojiyay wadahadalii uu kula jiray dowladda Ruushka ee ku aadanaa arimaha Suuriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maraykanka oo joojiyay wadahadalii uu kula jiray dowladda Ruushka ee ku aadanaa arimaha Suuriya.
On Oct 4, 2016 267 0
Dowladda Maraykanka iyo Ruushka oo ah labada dowladood ee sida qotada dheer u hagar daaminaya Muslimiinta Suuriya ayaa isku mari la’ qaabka loo sii socod siin karo xagal daacinta Muslimiinta, waxaana dowlad kasta ay aragtaa fakar gaar ah oo ka duwan kan midda kale.
Maraykanka iyo Ruushka oo dhawaan heshiis xabad joojin ah ka gaaray Suuriy ayaa socon weysay xabad joojintaas, waxaana markaas kadib labada dowladood ay bilaabeen iney hadalo kulul isku mariyaan warbaahinta.
War kasoo baxay Aqalka cad ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in Maraykanku gebi ahanba joojiyay wadahadalii uu lalahaa Ruushka ee looga hadlayay arimaha Suuriya, waxaana uu ku eedayay Ruushka inuu dhankiisa dowr fiican ka ciyaari waayay in la ilaaliyo Xabad joojinta.
Ruushka ayaa dhankiisa jawaab ka bixiyay warka kasoo baxay Maraykanka, waxaana Afhayeen u hadlay Ruushka uu sheegay in go’aankaas ay ka xunyihiin, islamarkaana Maraykanku qudhiisa rabin in xal laga gaaro arimaha Suuriya.